I-Terrace echibini - I-Airbnb
Acquaseria - San Siro, Lombardia Como, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Vittoria LoveComo
I-Terrazza sul Lago, i-studio esihle esine- "The Terrace" iyingxenye engcono kakhulu yefulethi. Ilungele 2!
Indawo enhle futhi enakho konke okudingekayo.
Ukubukeka kwechibi kuyamangalisa njengoba kuyindawo yokubhukuda ehlanganyelwayo.
I-Terrazza sul Lago iyistudiyo esihle kakhulu, sesimanje futhi esisha sha! Ilungele ababili.
I-Terrace iyindawo ethengisayo yale ndlu, cishe inkulu njengendawo eyisicaba futhi ifakwe kahle kakhulu itafula nezihlalo zokuphumula kanye nezindawo zokuphumula zelanga futhi empeleni ukubukeka okumangalisayo kwendawo ephakathi echibini.
I-condo yesimanje lapho i-Terrazza al Lago itholakala khona intsha, yesimanje futhi inendawo yokubhukuda enkulu ethandekayo enendawo eyanele yompheme.
Indawo ingaphambili lechibi, izinyathelo kuphela ukusuka echibini elinokuhamba kwechibi okukuxhumanisa nedolobhana elincane lase-Acquaseria nomgwaqo walo ophakeme onesidlo sokudla, isinambuzane, izithelo kanye nemifino kanye nezindawo zokudlela ezingu-2.
I-Terrazza sul Lago intsha endlini yokuqasha ngo-2019 futhi isanda kufakwa ifenisha futhi ifakwe ezingeni eliphakeme kakhulu. Indawo evulekile evulekile inikeza ikhishi eligcwele, ibha yesidlo sasekuseni, indawo yokuhlala ethokomele enosofa abangu-2, enye yikhwalithi enhle kakhulu yombhede wesofa, usayizi weNdlovukazi, i-smart tv enkulu negumbi lokugezela eligcwele elinokuhamba okukhulu phakathi kweshawa.
Kunendawo eyodwa yokupaka imoto yakho, ngaphandle komgwaqo indawo yokupaka yangasese eceleni kwendawo yokungena kanye ne-lift. Ukuze ufinyelele ezingeni le-pool, ukwehla futhi ngephakamiso eya ezingeni le-pool kwenza le ndlu ilungele umuntu onezinkinga zokuhamba ngezitebhisi ze-eccc.
Indawo yokubhukuda ehlanganyelwayo inkulu enendawo eyakhiwe ngamapulangwe, imibhede yelanga kanye nokufinyelela okulula ezitebhisini ezingu-10 phansi kwesikwele nasechibini elingezansi.
Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya engxenyeni eyinhloko yedolobha lase-Acquasiera eceleni kwechibi eliphambili lenza le ndlu ibe yindawo yokuzithokozisa evamile yase-Italy.
Sisikisela ukuthi ube nokuhlala okungekho emotweni kodwa futhi ungakwenza ngokuphuma futhi uncike esevisini yebhasi lomphakathi noma isevisi yamatekisi yendawo ese-Menaggio.
I-Terrazza sul Lago iyindawo ephumule kunazo zonke yokubuyela e- kusihlwa ngemva kokujabulela usuku echibini, ukuthola ama-hamlets endawo, ukuhamba ngesikebhe noma ukuziphumulela eceleni kwedamu!
ukubukwa kwechibi okumangalisayo	i-condo enhle ehlanganyelwayo ichibi	ukufinyelela kalula	echibini lesimanje nelisha sha!!
Ibungazwe ngu-Vittoria LoveComo
After many long summers spent at the lake as kids and youngsters, at 20 y…
Siyatholakala ukuba singene futhi siphume, nganoma yiziphi izinkinga noma izicelo zemininingwane phakathi nokuhlala kwakho kodwa siyakujabulela ukukushiya ukuze ujabulele iholide lakho!
Inombolo yepholisi: 013248-CNI-00086
Hlola ezinye izinketho ezise- Acquaseria - San Siro namaphethelo